Aghụghọ na-egwu YouTube vidiyo na mobile ngwaọrụ | Akụkọ akụrụngwa
YouTube: ụzọ dị iche iche iji kpọọ vidiyo gị
Naanị site na ịkọ okwu YouTube, ọtụtụ ndị ga-anwa iche n'echiche ihe anyị ga-anwa ịchọta ma emesịa, Ibudata iji kpọọ vidiyo a na kọmputa anyị. Ọ dị mma ugbu a Ọ dị mma ibudata ihe niile anyị hụrụ na ntanetị YouTube?
Ọ bụrụ na anyị arara onwe anyị nye nke a, agaghị enwe draịvụ ike nwere ike ịchekwa vidiyo niile anyị hụrụ n'ime YouTube, ebe ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịbụ egwu mgbe ndị ọzọ, akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ihe nkiri eserese. Zọ kachasị mma iji kpọọ vidiyo ndị a dabere na mkpa anyị nwere maka ọwa ya ọ bụla. Ugbu a, anyị ga-ekwupụta aghụghọ ole na ole ị nwere ike ịnabata mgbe ọ bịara kpọọ vidiyo YouTube, n’etinyeghi ha na komputa gi, ihe enwere ike ịme n'enweghị nsogbu ọ bụla site na weebụ yana kọmputa nkịtị na ọbụlagodi iji ngwa ole na ole na ngwaọrụ mkpanaka.
1 Ndị ọzọ dị iche iche iji kpọọ vidiyo YouTube
1.1 1. Ndetuta egwu ọkpụkpọ
1.2 Na-egwu vidiyo YouTube na ngwaọrụ mkpanaka
1.3 Gwuo egwu nke vidiyo YouTube na iOS
Ndị ọzọ dị iche iche iji kpọọ vidiyo YouTube
Dị ka anyị tụrụ aro na mbụ, n'isiokwu a anyị ga-ekwupụta ụzọ dị iche iche dị adị iji kpọọ vidiyo YouTube, ihe anyị ga-edepụta n'okpuru.
1. Ndetuta egwu ọkpụkpọ
Anyị ekwuola na ọ ga-ekwe omume ike listi ọkpụkpọ anyị, Ebee Enwere ike ịdenye vidio anyị ma ọ bụ ndị ọzọ dị iche iche. Nke a bụ ezigbo ihe ọzọ iji kpọọ vidiyo YouTube na-enweghị ibudata ha, n'agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị chọrọ ha na kọmputa, anyị nwere ike ime ya na a pụrụ iche ngwá ọrụ.
Ugbu a, ọ bụrụ na oge ụfọdụ anyị achọta ndepụta ọkpụkpọ nke masịrị anyị, anyị nwere ike ịchekwa ya dịka nke anyị n'ụzọ ndị a:
Gaa na profaịlụ nke onye ọrụ nke nke ndepụta ọkpụkpọ a.
Họrọ taabụ nke na-ekwu "ndepụta ọkpụkpọ" n'elu mmanya n'elu akaụntụ gị.
Họrọ (site na ịpị ma ọ bụ ịpị) listi ọkpụkpọ anyị nwere mmasị na ya.
Metụ aka (ma ọ bụ pịa) akara aka “+” n’elu aka nri nke egwu ọkpụkpọ a.
Ndị a dị mfe nzọụkwụ mere, nke a onye ọrụ si playlist a ga-azọpụta "dị ka nke anyị", nke a ọbụlagodi mgbe anyị anaghị edebanye aha na ọwa gị.
Na-egwu vidiyo YouTube na ngwaọrụ mkpanaka
Ihe niile anyị kwurula n’elu nwere ike ịdị mkpa nke ukwuu, n’oge ugbu a anyị hụrụ onwe anyị na-ahụ YouTube vidiyo si na ihe nchọgharị internetntanetị ọ bụ ezie na, nhọrọ ole na ole anyị kwurula banyere ya nwekwara ike itinye ya na onye ọkpụkpọ na ngwaọrụ mkpanaka.
Na nke ikpeazụ, YouTube nwere onye ahịa ya ma ọ bụ ngwa ya maka gam akporo na iOS mgbe ọ bịara kpọọ vidiyo nke ọwa ọ bụla. N'ebe a enwere nnukwu uru iji, n'ihi na ọ bụrụ na anyị mepee akaụntụ anyị wee malite ịmegharị vidiyo dị iche iche a tụrụ aro n'ebe ahụ, naanị anyị ga-ahọrọ ya.
Ihe na-adọrọ mmasị nke na-eme na gburugburu ebe a, n'ihi na anyị nwere ike ịkpọ vidiyo họrọ ma dọrọ ya na ala. Na nke a, a ga-etinye vidiyo YouTube n'ime obere igbe dị n'akụkụ aka nri ala. Nke a bara uru na ụdị ekwentị mkpanaaka ọ bụla.
Ọ bụrụ na anyị họrọ obere igbe a ebe vidiyo YouTube na-egwu ma dọrọ ya, ọ ga-ejupụta ihuenyo niile; ee kama anyị na-adọkpụrụ ya n'aka ekpe, YouTube video playback ga-apụ n'anya.
Gwuo egwu nke vidiyo YouTube na iOS
Nke a bụ nhọrọ na-adọrọ mmasị enwere ike ịnụ ụtọ ya ndị nwere ekwentị mkpanaaka na iOS, nke ahụ bụ, iPhone ma ọ bụ iPad. Ihe a na-emetụta naanị ma ọ bụrụ na anyị gụọ vidiyo YouTube na Safari kama ngwa mkpanaka.
Na-emeghe na Safari, anyị aghaghi ịchọ vidiyo YouTube nke anyị nwere mmasị na ya; mgbe nke a gasị, anyị ga-pịa bọtịnụ ahụInicio»Ikwupu na Desktọpụ.
N'oge ahụ anyị ga-emeghe Control Center iji mkpịsị aka anyị na-eji na-ekwu panel si ala nke ngwaọrụ. The playback njikwa ga-apụta, inwe pịa otu nke «play». Na nke a, vidiyo YouTube nke fọdụrụ na ihe nchọgharị Safari ga-amalite igwu egwu ma na ndabere, nke pụtara na anyị ga-ege ya ntị naanị.
Ọ bụrụ na anyị pịa bọtịnụ iji gbanyụọ ihuenyo nke ngwaọrụ mkpanaka anyị na iOS, anyị ga-ege ntị na vidiyo YouTube; Typesdị usoro ndị a na-ejikarị ụfọdụ ndị ọrụ chọrọ naanị ige ntị na vidiyo nke vidiyo YouTube mana na ndabere, na-enwe ike ịrụ ọrụ na ngwa ọ bụla ọzọ na-enweghị nsogbu ọ bụla na ọbụlagodi mgbe iPad ma ọ bụ iPhone dị na ihuenyo ahụ .
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » YouTube: ụzọ dị iche iche iji kpọọ vidiyo gị
Aghụghọ iji Gbochie kọntaktị na GTalk
Otu esi ewepu nkuzi nkuzi na Windows 8.1 kpamkpam